माधवले १५ वर्षमा एमालेलाई रसातलमा पुऱ्याए, केपीले पाँच वर्षमै सगरमाथा चढाए | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
माधवले १५ वर्षमा एमालेलाई रसातलमा पुऱ्याए, केपीले पाँच वर्षमै सगरमाथा चढाए
ओलीको तेजपूर्ण व्यक्तित्वबाट जलिरहेका छन्,नेपाल
२०७८ जेष्ठ १८, मंगलवार १६:१०:००
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पूर्वमहासचिव माधव नेपाललाई अहिले छटपटी छ । उनी पार्टीबाट निकालिएर सडकमा पुगेका छन् । यद्यपि, उनका लागि यो खासै चिन्ताको विषय होइन । किनभने, योभन्दा ठूलो चिन्ता अर्को छ । त्यो हो, केपी शर्मा ओली शक्तिमा छन् । ओली देशको प्रधानमन्त्री छन् । ओली नै देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष छन् । सारा देशको राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको छ । जनमानसमा एक प्रकारको छाप छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विशेष चिनारी छ । केपी ओलीको यो तेजपूर्ण व्यक्तित्वबाट जलिरहेका छन्, माधव नेपाल ।
ओली शक्तिमा रहनु र एमाले देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी रहिरहनु नै माधवका निम्ति अहिले सहनै नसकिने औडाहायुक्त अवस्था हो । त्यसैले उनको सम्पूर्ण शक्ति, समय र ध्यान ओली र एमालेलाई खरानी बनाउन केन्द्रित भएको छ । एमालेको खरानीमा उभिएर उनी आफ्नो तुष्टिको महल खडा गर्न खोजिरहेका छन् । ओलीको अवसानमा उनी आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको वैतरणी पार गर्न खोजिरहेका छन् ।
ओलीलाई जसरी पनि शक्तिच्युत बनाउन नेपालले नेकपाभित्रै छँदा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतसँग मोर्चा कसे । नेकपा सग्लो नरहेपछि प्रचण्ड आफ्नो बाटो लागे । तर, नेपालले प्रचण्डको फेर समाउन छाडेनन् । त्यतिले नपुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठ धाम धाउन थाले । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको घरैमा पुगेर हारगुहार गर्न थाले । जहाँ पुगे पनि उनको एउटा मात्र ध्येय छ, ओलीलाई शक्तिच्यूत बनाउने । ‘प्रभु’सँग उनको एउटै पुकारा छ, ओली उभिएको एमालेको संरचना तहसनहस पारियोस् ।
न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण, राजनीतिक नैतिकता र मानवीय गुण हुन्थ्यो भने नेपाल एमालेजस्तो देशकै ठूलो एवं प्रभावशाली दलको वरिष्ठ नेता भएरै बसिरहेका हुन्थे । प्रचण्डको चञ्चलतामा उनले शीतलताको वर्षा गराउँथे । विदेशी शक्तिका प्रहारमा गोटी होइन, ढाल बनेर रहनेछ । तर, उनको त्यो औकात थिएन । जे औकात हो, त्यहीअनुसारको भूमिका प्रदर्शन गरे । ओलीका विरुद्ध प्रचण्डलाई उचाल्ने उत्तोलक बने । झलनाथलाई कुण्ठाको कुण्डमा डुबाए, वावदेवलाई महत्त्वाकांक्षाको बाँसमा चढाए ।
माधवले १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरे । कुनै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट होइन, मदन भण्डारीको असामयिक निधनपछि काकतालीवापत उनले त्यो पद पाएका थिए । त्यो संवेदनशील घडीमा अरु कसैले दावी गरेनन् । पुरानो कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले जनवादी केन्द्रीयताको मदानीका रुपमा विस्तारै माधवलाई नै नेतृत्वमा स्वीकार गऱ्यो एमाले पंक्तिले ।
तर, उनले त्यस अवधिमा के गरे ? एमालेलाई कहाँबाट कहाँ पुऱ्याए, इतिहासका पानामा छर्लंगै छ । सत्ता र शक्तिको भोकले अन्धो धृतराष्ट्रसरह उनले एमालेलाई चलाए । पूर्वपञ्चहरुसँग अपवित्र गठजोड गरे । जनआन्दोलनलाई बेवारिसे छाडेर दरबारमा दाम चढाए । रामकुमारी झाँक्रीका टाउकामा शाही प्रहरीका लाठी बजारिरहेकै बेला प्रतिगमन आधा सच्चिएको घोषणा गर्दै सत्ताको हिस्सेदारी खोज्न पुगे ।
वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीलगायतलाई पार्टीबाट किनारा लगाउँदै जाँदा विद्रोहको विष्फोट भयो र एमालेलाई विभाजनसम्म पुऱ्याए । कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान नभएका नेपालले केवल सत्ता र शक्तिका अन्धो लालसा एमालेलाई डुबाउँदा तत्कालीन राप्रपा र सद्भावनाको हाराहारी पुऱ्याए । कहिले यो ठीक छ, कहिले ऊ ठीक छ भन्दै जाँदा उनले एमालेलाई लिंग नखुलेको पार्टीको उपमा दिलाए ।
यी सबका बाबजुद ओलीले कालकुट विष पिएर सहेर बसे । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि एमाले पार्टी, जबज अनि एमालेको युवा पिँढीको रक्षाकवच बनेर बसे । ओलीले कहिल्यै पार्टीको अहितमा बोलेनन् । कहिल्यै पार्टी नेतृत्वको विरुद्ध कसैसँग गठजोड गरेनन् । अनुशासन तोडेनन् । सिद्धान्तहीन गठजोड गरेर उनले कहिल्यै पार्टी र कार्यकर्तालाई धर्मसंकटमा पारेनन् ।
ओली नेतृत्वमा उदाएपछि नै हो, एमालेको पहिचान खुलेको पनि । राष्ट्रियतामा उनले स्पष्ट अडान राखे । माओवादी उच्छृंखलताका विरुद्ध सतीसाल बनेर उभिए । संविधान निर्माणमा मुख्य पहलकदमी लिए । नयाँ संविधान र १६ बुँदे समझदारीको बचाउमा उनी भीष्मपितामह बनेर उभिए । यी दुवै दस्तावेजमा भारतले आफ्नो कलम वा मसी केही पनि प्रयोग नभएको ठानेर रोक्नका लागि दूत पठाउँदा पनि ओलीले त्यसको दृढतापूर्वक सामना गरे ।
यो संविधानको माया अरुसँग जति छ, त्योभन्दा बढी ओलीसँग छ । यो व्यवस्थाप्रति अरुको लगाव जति छ, त्योभन्दा बढी ओलीको छ । यो संविधानलाई धूलीसात् बनाउन लागिपरहेकाहरुलाई ओलीले मनाउने प्रयास गरे । सीके राउतदेखि नेत्रविक्रम चन्दसम्मले ओलीको व्यक्तित्व स्वीकार गरे । ओलीको देशभक्तिपूर्ण चट्टाने अडानलाई आत्मसात् गरे । आफूले लिएको बाटो परिवर्तन गरी ओलीमार्गमा प्रवेश गरे ।
सुतेको मानिसलाई ब्युँझाउन सकिन्छ तर सुतेको अभिनय गर्नेलाई सकिँदैन भनेझैँ सीके राउत, विप्लवदेखि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र कमल थापाहरुलाई मनाउन सम्भव भयो तर माधव नेपाललाई सकिएन । किनभने, माधवसँग कुण्ठाबाहेक केही छैन । उनी आफैभित्रको ईर्ष्याको ज्वालाग्निमा दन्दनी जलिरहेका छन् । ओलीलाई जलाउन खोज्छन् तर राप आफैतिर फर्किन्छ । ओलीलाई थापेका हरेक धरापमा माधव एकपछि अर्को गरी आफै पर्दै छन् ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे, सकेनन् । पार्टीबाट निकाल्न निर्णय नै लेखाए तर आफ्नै उत्ताना टाङ भए । प्रचण्डलाई अगाडि सारे, प्रचण्ड नै पछारिए । अहिले उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई शिखण्डीस्वरुपमा अगाडि सारेर ओलीसँग रिस फेर्न खोज्दै छन् । त्यसमा पनि माधवसँगै देउवाको बचेखुचेको साख पनि धूलीसात् हुने निश्चित छ।
माधव यसरी रन्थनिनुको एक मात्रै कारण हो, २०७१ साउनको नवौँ महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित हुनु । ओलीसँग हार स्वीकार गर्न नसक्नु नै अहिलेको दुर्दशाको मूल कारण हो । ओलीले माधवलाई १५ वर्ष सहे, व्यहोरे । तर, माधवलाई पाँच वर्ष धैर्य गर्न पनि मुस्किल भयो । नवौँबाट दसौँ महाधिवेशन पर्खने शक्ति उनीसँग भएन । एउटा निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचनसम्म कुर्ने सामर्थ्य पनि रहेन । लोकतन्त्रमा योभन्दा गएगुज्रेको सोच अर्को के होला ?
माधवलाई लागेको होला, आफूसँगै ओलीलाई पनि सडकमा पछारिनेछ । तर, यो भ्रमबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुनु नै उनको हितमा हुनेछ । ओलीसँग एमालेको संगठन छ । जनताको बहुदलीय जनवाद छ । मदन भण्डारीको विरासत छ । वृद्धभत्तादेखि आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रमको छाप छ ।
माधवले जसरी ओलीले आफ्नै मातृपार्टी र मातृभूमिप्रति गद्दारी गरेका छैनन् । माधवले १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरे । पटकपटक सत्ता र शक्तिमा बसे । यही पार्टीको प्रतापले प्रधानमन्त्री पनि भए । उनले अनेकन शक्तिकेन्द्रसँग दृश्य अदृश्य सौदा गरे । तर, अहिलेसम्म भारतसँगका असमान सन्धि पुनरवलोकनको कुरा उठाएनन् । लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो भन्न सकेनन् । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन चुनौती दिन सकेनन् । सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउटपोस्ट राख्न सकेनन् । मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा, माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली देशैभरमा पठाउने अठोट लिएर काम गर्न सकेनन् । रेल, तेल र पानीजहाजका सपना देख्न सकेनन् । किन ? किनकि, उनीसँग यतिसम्म देख्ने ब्रम्ह नै थिएन ।
उनको त्यो तेस्रो नेत्रमा शक्तिको अतृप्त भोक र लालसाको पट्टी लागेको थियो ।
अहिले ओलीसँगको रिसले उनी आफ्नै पार्टी र सहयोद्धाहरुप्रति गद्दारी गर्दै छन् । कतिपय आसलाग्दा र भर्भराउँदा युवा नेताको भविष्य पनि बर्बाद पार्दै छन् । यस घडीमा अब रामराम भन्नुको विकल्प छैन ।